Govt Willing to Work with Private Parters on Waste to Power Projects | Myanmar Business Today
HomeBusinessGovt Willing to Work with Private Parters on Waste to Power Projects
Govt Willing to Work with Private Parters on Waste to Power Projects
The government is willing to collaborate with private partners to implement waste to power projects in Kachin State, Chin State, Kayah State, Bago Region, Magway Region, Mandalay Region, Mon State, Rakhine State, and Ayeyarwaddy Region, said according to U Nyi Nyi Tun, Member of Naypyidaw Council.
Britain based Organic Asia Co., Ltd, and Yangon based Shwe Pyi Company have signed an MoU to buildawaste-to-power plant in Shan State.
Moreover, the government is also planning to buildawaste burning plant in Myawaddy in the 2020-21 Fiscal Year with $7.6 million obtained from ADB Bank, and upgrade the waste management system of Hpa-an using $8.6 million from ADB Bank.
Likewise, Japan’s Mistubishi Research Institute and Fujita Corporation will also buildawaste burning plant in Monywa, Sagaing City.
In Yangon, the government has builtawaste-burning plant that can burn 20 tonsaday and YCDC is also working on waste to biogas plant using EUR 50 million ODA aid from Poland. There is also anther waste toapower plant, built with the help of the government of Japan, in Shwe Pyi Thar Township, Yangon.
ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များက အမှိုက်မီးရှို့စက်တည်ဆောက်ရန် ဆက်သွယ်လာမည်ဆိုပါက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု ဦးညီညီထွန်းကပြောသည်။
ရှမ်း ပြည်နယ်တွင် အင်္ဂလန်အခြေစိုက် Organic Asia Co.Ltd နှင့်ရန်ကုန် မြို့ရှိ ရွှေပြည်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့က စွန့်ပစ်အမှိုက်မှ စွမ်းအင်လောင်စာ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် အမှိုက်မီးရှို့စက်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်း နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဦးညီညီထွန်းကပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ADBမှ ရရှိသည့် ဘားအံမြို့ အမှိုက်စွန့်ပစ်စနစ်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၆ သန်း၊ မြဝတီ မြို့အမှိုက်စွန့်ပစ်စနစ်အတွက် ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၆ သန်းကို ချေးငွေရယူပြီး ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်ကာ အမှိုက်မီးရှို့စက်တည်ဆောက်ရန် စီမံနေကြောင်းလည်းသိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့တွင်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံ Mistubishi Research Institute နှင့် Fujita Corporation တို့ပူးပေါင်း ၍ အမှိုက်မီးရှို့စက်တည်ဆောက်နိုင်ရန် ဆောက်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့ အစိုးရဆေးရုံ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ ၇၆ ခု၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်း ၁၉၂၅ ခုတို့မှ နေ့စဉ်ထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးရန် လှိုင်သာယာမြို့နယ် ထိန်ပင်တွင် တန် ၂၀ အမှိုက်မီးရှို့စက်ကို တပ်ဆင်ကာအမျိုက်များဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည်။
ပိုလန်နိုင်ငံအစိုး၏ ODA ချေးငွေ ယူရိုသန်း ၅၀ ကိုအသုံးပြုကာ ပိုလန်နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုသော နည်းပညာဖြင့် အမှိုက်များပြုပြင် သန့်စင်ချေဖျက်ဆီးလုပ်နိုင်မည် Waste to Biogas Plant တည်ဆောက်ခြင်း စီမံကိန်းကိုစည်ပင်သာယာရေးက အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုအပြင် ဂျပန်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ် လှော်ကားတွင် အမှိုက်မှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိသည်။
Previous articleGovt Plans K2,000 Billion Loan for Farmers
Next articleMyanmar E-commerce Current Scenario